Home Wararka Wararkii ugu dambeeyay dagaal ka socda Beledweyne
Wararkii ugu dambeeyay dagaal ka socda Beledweyne
Waxa magaalada Baledweyne goordhaw ka bilowday dagaal xoogan, waxana xaafadaha magaalada laga maqlayaa rasaasta hubka nuucyadiisa kala duwan iyadoo ay kasoo baxayaan xoga kala duwan.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka u dhaxeyo ciidama uu hogaaminayo sargaal lagu magaabo Nuur Dheere oo ka mid ahaa saraakiishii hogaamineysay ciidamadii Badbaadada Hiiraan iyo ciidama kale.
Wararka ayaa sheegaya inuu jiro qasaara soo gaaray dad shacab ah oo aan ka fogeyn goobta uu dagalku ka socda oo ah xaafada Kooshin ee magaalada Baledweyne gaar ahaan laanta Sheikh Cali Bood.
Nuur Dheere ayaa horay ugu mid ahaa saraakiishii hogaamineysay ciidamada la magac baxay Badbaadada Hiiraan oo magaalada Baledweyne ka hor istaagay safar xiligaas la qorsheynayay in magaalada u ku yimaado madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe.
Previous articleDagaal culus oo Caawa ka socda magaalada Baledweyne
Next article[SAWIRO] Maamulka Gobolka Hiiraan oo qabtay rag weeraray Guddoomiye Jeyte
Uhuru Kenyatta oo fasax dheer gelaya xilli dalkiisu uu gelayo dabaal-degga...
XOG;Farmaajo iyo Madaxdii hore Ee Dalka oo wada hadlaya&Khilaaf soo kala...